शनिवारको दिन कौसीमा घाम ताप्दै घरबेटी दीदीलाई…उमेर पुगेकाले मात्र पढ्नुहोला – Rabin's Blog
दिदीले चिया लिएर आई । चिया दिँदा दिदीको दुधको पोको अाधाभन्दा बढ़ीनै प्रस्ट देखिन्थ्यो । दिदीले ‘भाई आजको खाना मै थिम खानुपर्छ नि’ भनेर ड्रेस चेन्ज गर्न कोठामा गई । कोठामा चुकल पनि नलगाई लुगा चेन्ज गर्न थाली । एतिकैमा बत्ती गयो । अनि दिदीले भन्नु भयो भाई म लुगा चेन्ज गर्दैछु अली अध्यारो भयो इन्वर्टर अन गर्देउन । मलाई थाहा थिएन इन्वर्टर कहाँ छ भनेर अनि मैले सोधे इन्वर्टर कहा छ दिदी ? दिदीले भन्नुभयो मेरो ड्रेस चेन्ज गर्ने रूममा नै । म त एकदम डर लागेको जस्तो भयो अनि ढोका खोलेँ । ओह माई गड ! मैले दिदीलाई त पेंटी र ब्रा मा पो देखेँ । इन्वर्टर अन गरेपछि मेरो लाडो सनक्क भएर आयो ।दिदी एकनजरले हेरिराख्नु भएको रहेछ, म पनि आर्मी मान्छे के कम भनेर सोझै दूध माड़ेँ ।
यसरी सम्मानित हुदैछन् धुर्मुस सुन्तली